FAQs - Hebei Minshang hwokushandura zvinhu zvipenyu Co., Ltd.
Q1: Wako Unhu Hwako Hwakagamuchirwa neTatu Bato Lab?
A: Hongu, Zvese zvigadzirwa zvakaomeswa kuyedzwa neQC yedu, yakasimbiswa neQA uye yakatenderwa neyechitatu bato lab muChina, USA, Canada, Germany, UK, Italy, France nezvimwewo Saka iwe uchavimbiswa neGood Quality kana ukatisarudza isu .
Q2: Unoita sei kunyunyuta kwemhando yepamusoro?
A: Chekutanga pane zvese, dhipatimendi redu reQC richaongorora zvakanyanya zvigadzirwa zvedu zvekutengesa kunze neHPLC, UV, GC, TLC zvichingodaro kuitira kudzikisa dambudziko remhando yepamusoro kusvika zero zero. Kana paine dambudziko rehunhu chaihwo, rakakonzerwa nesu, tinokutumira zvinhu zvemahara zvekutsiva kana kudzorera kurasikirwa kwako.
Q3: Unogamuchira Sample Order?
A: Ehe, isu tinogamuchira diki odha kubva ku10g, 100g uye 1kg yeako ongororo yemhando yezvinhu zvedu.
Q4: Pane chero chakaderedzwa here?
A: Ehe, kune yakakura huwandu, isu tinogara tichitsigira nemutengo uri nani.
Q5: ndeapi mazwi ekubhadhara aunogamuchira?
A: tinoda kubvuma kuendeswa kubhangi, Western Union kana Moneygram kana BTC
Q6: Zvinotora nguva yakareba sei kuti zvinhu zvasvika?
A: Zvinoenderana nenzvimbo yauri, Kune diki odha, ndapota tarisira mazuva mashanu neDHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS. Zvekuraira kwakawanda, ndapota tendera mazuva mashanu kusvika kumakumi masere neMhepo, mazuva makumi maviri nemakumi matatu nemashanu neGungwa
Q7 Une chero mutemo wekudzosera?
A: isu tine yakanaka mushure mekutengesa sevhisi uye zvakare-kutumira mutemo kana pasuru ikarasikirwa Kusangana kwedu kwenguva refu nevatengi vedu kwakaunza mabhenefiti makuru Isu tinogara tichitarisira zvakanyanya mupaketi yezvigadzirwa zvedu vatengi vedu vanozosimbisa izvi sezvo kunyangwe ivo vachinetseka uzviwane pasina rubatsiro pane dzimwe nguva. Asi kunyangwe nekuedza kwedu kukuru kuchiri kugona kunotora mashoma mapakeji. Mune ino mamiriro ezvinhu tinovimbisa reship yemahara yekumisikidza kwenguva yakareba hukama
Q8: Ndingawana muyenzaniso here?
A: Ehe saizvozvo. Kune akawanda zvigadzirwa isu tinogona kukupa iwe yemahara sampuro, nepo mari yekutumira ichifanira kuitisa padivi pako.